Amnesty International Inoti Vana Vakavhiringwa Nemurambatsvina Vachiri Kushaya Fundo
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vana vakaputsirwa dzimba dzavo pasi pechirongwa cheOperation Murambatsvina vari kunonga svosve nemuromo uye vazhinji vacho havasi kuenda kuchikoro, izvo zvopa kuti vamwe vavo vaite zvechipfambi kuti vawane kurarama.
Hurumende yakapwanyira vanhu zviuru mazana manomwe dzimba dzavo makore matanhatu apfuura, ikavimbisa kuti ichavaka dzimba asi kusvika pari zvino hapana chati chaitwa.
Amnesty International yaparura gwaro rayo muHarare, iro rino tsanangura kushupika kuri kuita vana zvikuru sei avo riri kuti vari kutadza kudzidza nekuti nzvimbo dzavagere, dzakaita sekuHopley Farm, hakuna zvikoro, mvura yakachena nezvimwe zvakadaro.
VaSesil Zvidzai vanowe mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu vaudza Studio 7 kuti hurumende ine basa guru kugadzirisa nzvimbo dzekugara dzakanaka dzevanhu vanogara kuHopley Farm nedzimwe nzvimbo dzakadaro uye vati zvakaitika paMurambatsvina hazvifaniri kuitika zvakare muZimbabwe.
Hurukuro naVa Sesil Zvidzai